प्रचन्डले किन देउवालाई मार्ने कोसिस गरे ? आफुलाई मार्ने कोसिस गरेको भन्दै प्रचण्ड बिरुद्ध शेरबहादुरले उजुरी – ZoomNP
प्रचन्डले किन देउवालाई मार्ने कोसिस गरे ? आफुलाई मार्ने कोसिस गरेको भन्दै प्रचण्ड बिरुद्ध शेरबहादुरले उजुरी प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक १९, २०७३ समय - १९:१९:१० कात्तीक १९ काठमाडौं आफुलाई मार्ने कोसिस गरेको भन्दै प्रचण्ड बिरुद्ध शेरबहादुरले उजुरी दिएका छन ! नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकले शान्ति समिति डडेल्धुरामार्फत आयोगमा दाहालविरुद्ध देउवाका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको हो । सभापति देउवाकै निर्देशनमा आयाेगमा उजुरी दर्ता गराइएको डडेल्धुरा कांग्रेसले जनाएको छ ।